Ungalikhipha kanjani igazi ezingutsheni | Bezzia
Ungasusa kanjani igazi ezingutsheni
UToñy Torres | 03/06/2021 10:00 | Ikhaya
Ukususa igazi ezingutsheni kungaba nzima impela, ikakhulukazi uma bekuyisikhathi eside ibala selomile. Izindaba ezimnandi ukuthi ngokubekezela okuncane nokuningi kwalokhu kusebenza okusebenzayo, ungasusa amabala egazi angafuneki ezingutsheni zakho ozithandayo. Qaphela kahle la maqhinga alandelayo, lapho uzodinga kuphela ukusebenzisa imikhiqizo yemvelo.
Ngegazi, kufanele uthathe isinyathelo ngokushesha, ngoba isikhathi siyahamba, kulukhuni kakhulu ukukuqeda. Ngakho-ke ungashiyi i-bloodstain kwesinye isikhathi ukwenza ngokushesha kuzokwenza umehluko. Ngakolunye uhlangothi nangokuphikisana nalokho okuvame ukucatshangwa, kufanele usebenzise amanzi abandayo njalo. Uma usebenzisa amanzi ashisayo, igazi liyaqina bese linamathela ezicutshini.
1 Amaqhinga okususa igazi ezingutsheni
1.1 Ungalikhipha kanjani igazi kumatilasi
1.2 Uviniga omhlophe nesoda yokubhaka
Amaqhinga okususa igazi ezingutsheni
Sesivele sicacile ukuthi kufanele sisebenze ngokushesha, nokuthi kufanele sisebenzise amanzi abandayo futhi manje, yimuphi umkhiqizo esizowusebenzisa ukususa igazi ezingutsheni? Emakethe ungathola imikhiqizo ethile yokususa amabala, noma kunjalo, igcwele izinhlanganisela zamakhemikhali ezingalimaza izingubo zakho ezibucayi kakhulu. Izindaba ezimnandi ukuthi ephentini ungathola izithako zemvelo ongasusa ngazo igazi ezingutsheni, njenge-baking soda, usawoti, uviniga omhlophe noma i-hydrogen peroxide.
Ngaphambi kokuqala ukwelapha isisihla segazi ezingutsheni, kufanele wazi ukuthi ngabe lomile ngokuphelele noma uma kungamabala asanda kuvela. Kulokhu kokugcina, into yokuqala okufanele uyenze ukufaka ingubo emanzini abandayo anensipho. Gcoba ibala ukuze linamathele kahle ezintanjeni zendwangu. Kamuva, hlambulula kahle bese uhlola futhi nebala legazi seliphele nyaUma kungenjalo, phinda inqubo.
Lapho amabala egazi asevele omile kakhulu, kuyadingeka ukwelapha ngaphambilini ukuze ukwazi ukukuqeda ngokuphelele. Kwesinye isikhathi kuvela amabala egazi kumatilasi noma emashidini, womabili avela emanxebeni amancane angabonakali nangesikhathi sokuya esikhathini. Ukuba sezindaweni ezingabonakali kangako, kuvame kakhulu ukuthi zome. Qaphela la maqhinga okususa igazi ezingutsheni ezimweni ezinjalo.
Ungalikhipha kanjani igazi kumatilasi
Ukuze ususe amabala egazi kumatilasi kufanele landela izinyathelo ezilandelayo:
Futha i-hydrogen peroxide endaweni futhi mayisebenze phakathi kwemizuzu engama-30 nengama-60. Qaphela, leli qhinga alisebenzi ezingutsheni ezibucayi ngoba i-hydrogen peroxide ingashisa ingubo.
Ngemuva kwalesi sikhathi, fafaza amanzi abandayo bese usebenzisa ibhulashi ukukhuhla ibala kahle.
Manje, susa izinsalela ngendwangu emanzi ukubona isimo sendawo yegazi.
Ukuqeda, sebenzisa okokuhlanza izandla i-powder detergent kanye ne-brush bese uhlikihla kuze kuphele ibala.
Vumela ukoma okungcono elangeni, ngoba lokhu kuyisibulala-magciwane semvelo ne-bleach.
Uviniga omhlophe nesoda yokubhaka
Isoda yokubhaka noviniga wokuhlanza omhlophe kungokwemvelo, okulula ukufinyeleleka, imikhiqizo engabizi ukuyihlanza nganoma yini. Esixhumanisweni uzothola okuningi kwe- ukuhlanza amacebo usebenzisa nje le mikhiqizo. Kodwa futhi, bebonke bakha iqembu eliphelele elimelene namabala egazi ezingutsheni. Qaphela:
Into yokuqala ukusebenzisa i-bicarbonate ngqo emthonjeni wegazi.
Ngemuva kwalokho fafaza uviniga omhlophe phezu kwesoda yokubhaka. Uzobona ukuthi kwenzeka kanjani ukusabela, ungakhathazeki ngokuthi kuyinto ejwayelekile. Shiya ngaphandle kokugcoba imizuzu engaba ngu-20 kuya kwengu-30.
Manje, susa umkhiqizo ngendwangu emanzi.
Ukuqeda, Beka ingubo emanzini amaningi abandayo.
Bheka ukuthi isisihla segazi sesiphumile yiniUma kunjalo, ungageza izingubo zakho ngokujwayelekile emshinini wokuwasha. Uma kungenjalo, phinda inqubo kuze kube yilapho igazi selisuswe ngokuphelele.
Njengethiphu lokugcina khumbula ungafaki izingubo ezinamachaphaza egazi emshinini wokuwasha kanye nezinye izingubo. Igazi lingangcolisa ezinye izingubo futhi lize lonakalise nezindwangu ezintekenteke. Hlola izingubo zakho kahle ngaphambi kokuzifaka emshinini wokuwasha futhi ungagcina izingubo zakho zisesimweni esifanele isikhathi eside.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ungasusa kanjani igazi ezingutsheni
Izindaba ezivelele zomculo zenyanga kaJuni
Unganciphisa kanjani isisindo ngaphandle kokuzivocavoca umzimba